तपाईंको आजको राशीफल (मंगलवार २०७६ श्रावण २८) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय -
२०७६, २८ श्रावण मंगलवार ०२:४८ August 13, 2019 clickonLeaveaComment on तपाईंको आजको राशीफल (मंगलवार २०७६ श्रावण २८) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय
स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। आज तपाईंले भूमि, अचल सम्पत्ति, वा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईंको घरेलू दृश्य केहि अप्रत्याशित हुनेछ। तपाईंको प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन्। तपाईंले आज आफ्नो दृष्टिकोणमा र कार्यालयको कामको गुणस्तरमा सुधारको अनुभव गर्नु हुनेछ। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। आफ्नो जीवनको प्रेम, आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई अद्भुत आश्चर्य दिन सक्छन्।
आफ्नो जाँगरको उत्थान गर्न तपाईंको मनमा एउटा उज्ज्वल, सुन्दर र महिमित तस्वीर बनाउनुहोस। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। पारिवारिकसँग सम्बन्ध र बन्धनको नवीकरणका लागि उचित दिन। आफ्नी प्रियतमालाई बुझ्ने गर्नुहोस्। आज गरेको लगानी आकर्षक हुनेछ तर तपाईंले साझेदारहरूबाट केही विरोध हुन सक्छ। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। तपाईंको जोडी आज ऊर्जा र प्रेमले भरिएको हुनेछ।
तपाईंको लगातार सकारात्मक सोचलाई पुरस्कृत गरिनेछ। किनकि तपाईं आफ्नो प्रयासमा सफल हुने सम्भावना छ। पैसाको समस्या दिनको पछिल्लो भागमा सुधार हुनेछ। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। लामो समय पछि आफ्नो मित्रसँग भेट हुने सोचेर गुल्टिंदै गरेको ढुँगा झैं तपाईंको मनको ढुकढुकी बढ्न सक्छ। रिटेलर र थोक व्यापारीहरूको लागि राम्रो दिन। बाँकी रहेका समस्याहरू छिट्टै नै समाधान गरिनु पर्ने छ र तपाईंले कहींबाट सुरु गर्नु पर्नेछ भनेर याद गर्नुहोस् – त्यसैले सकारात्मक विचार लिएर आजैबाट प्रयास सुरु गर्नुहोस्। विवाह यौनको लागि मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले ढाँट्छन्। किनभने, आज तपाईंलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने थाहा हुनेछ।
आफैं उपचार नगर्नुहोस् किनकि दबाइमा निर्भरताको सम्भावना बढ्न सक्छ। बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। मित्रहरू र अपरिचितहरूसँग समान रूपमा होसियार हुनुहोस्। तपाईंले आफ्नो जोडीसँग भावनात्मक धोखेबाजी गर्नबाट रोक्नु पर्छ। आज काममा तपाईंको सफलताको दिन हुनेछ! आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। एउटा अपरिचितले तपाईं र तपाईंको जोडी बीच झगडा हुन सक्छ।
आज तपाईं आशाको जादू अन्तर्गत हुनुहुन्छ। दीर्घ अवधिको आधारमा तपाईंले लगानी गर्नुभयो भने पर्याप्त लाभ हुनेछ। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। आफ्नो प्रिय वा जोडीबाट राम्रो सञ्चार वा सन्देशले आज तपाईंको हौसलामा बृद्धि गर्नेछ। आज अनुकूल दिन हो; काम गर्दा यसको उचित उपयोग गर्नुहोस्। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। यो दिन तपाईंका वैवाहिक जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन हुन सक्छ।
बढी क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो व्यायाममा लीन हुनुहोस्। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। दिनको उत्तरार्द्धमा तपाईं आराम गर्न र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो उत्तम व्यवहारमा हुन आवश्यक छ – किनभने आज आफ्नो प्रेमीलाई नराम्रो लाग्न धेरै केही हुनु पर्दैन। नयाँ ग्राहकहरुसँग बातचीत गर्ने यो एउटा अद्भुत दिन हो। सामाजिक साथै धार्मिक कार्यको लागि उत्कृष्ट दिन। वैवाहिक जीवनले केही नराम्रो प्रभाव लिएर आउँछ; तपाईंले आज यसको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
तपाईंका साथी वा परिवारका सदस्यहरूसँग हुने खुशीयाली यात्राले तपाईंलाई तनाउमुक्त बनाउँछ। आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। वृद्ध व्यक्तिको स्वास्थ्यले केही चिन्ता गराउँछ। तपाईंको प्रेमीकासँग केही भेद उत्पन्न हुन सक्छ – तपाईंले आफ्नो जोडीलाई आफ्नो स्थिति बुझाउने प्रयास गर्न गाह्रो पर्नेछ। फाइदाजनक दिन – त्यसैले उँभो उठ्नुहोस् र अगाडि जानुहोस् किनभने राम्रो अवसरले तपाईंलाई पर्खिरहेको छ। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। आज आफ्नो जोडी तपाईंको लागि अति व्यस्त हुन सक्छन्।
समय व्यस्त भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ, तर आफ्नो जीवनलाई सहज नलिनुहोस्, जीवनको हेरविचार वास्तविक भाकल हो भन्ने महसुस गर्नुहोस्। व्यस्त र तनाउपूर्ण यात्रा गर्नुहोस् – तर आर्थिक फाइदा भने होस्। सम्पूर्ण परिवारलाई समावेश गर्ने मनोरञ्जनमा धेरै मजा हुनेछ। एउटा आश्चर्यको सन्देशले तपाईंलाई राम्रो सपना दिनेछ। तपाईं सबैको लागि आज धेरै सक्रिय र सामाजिक कार्य गर्ने राम्रो दिन हुनेछ – मानिसहरूले सल्लाहको लागि तपाईंको मुख हेर्नेछन् र तपाईंले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नेछन्। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
तपाईंको मनमा अनावश्यक विचार आउन नदिनुहोस्। तपाईंको मानसिक दृढता बढाउन शान्त र तनाउ मुक्त बस्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् – कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। आज तपाईंलाई लाभ हुनेछ – किनकि परिवारका सदस्यहरूले सकारात्मक ढंगमा प्रतिक्रिया गर्नेछन्। प्रेमले एक ठाउँमा उभिए तापनि तपाईंलाई नयाँ संसारमा घुमाउन सक्छ। यो तपाईं रोमान्टिक यात्रामा जाने दिन हो। निर्णयको बाटामा गर्वलाई आउन नदिनुहोस्। अधिनस्थहरूले भनेको पनि सुन्नुहोस्। तपाईंको मनमा भएको कुरा भन्न नडराउनुहोस्। तपाईंको विवाहले यस दिन सुन्दर मोड लिनेछ।
तपाईंको रिसले सानो कुरालाई ठूलो पहाड बनाउन सक्छ र मात्रै आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको मन बिगार्छ। ती महान व्यक्तिहरू साँच्चै भाग्यवान् हुन जसको बुद्धिले रिसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ। तपाईंलाई त्यसले जलाउनु अघि आफ्नो रिसलाई जलाउनुहोस्। किन्न बाहिर जानु अघि तपाईंसँग भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। आज उपस्थित भएको सामाजिक भेलामा तपाईं विशेष व्यक्ति हुनुहुनेछ। कसैले पनि तपाईंको प्रेम अलग गर्न सक्ने छैन। “आज तपाईंले प्राप्त गरेको ज्ञानले साथीहरूसँग सामना गर्न तपाईंलाई सहारा दिन सक्छ।” तपाईंमध्ये कसैले टाढाको यात्रा गर्नुहुनेछ – यो धेरै व्यस्त हुनेछ – तर अत्यधिक फलदायी पनि हुनेछ। तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
तपाईंको हँसिलो स्वभावले कसैलाई यस कौशलको विकास गर्न आफूलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्नेछ किनकि तपाईंले उसलाई यो कुरा बुझ्ने बनाउनुभयो कि खुशियाली भेला पारेको सम्पत्तिमा नभएर हामी भित्र हुन्छ। तपाईंलाई नयाँ वित्तीय लाभ प्रदान गर्न केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। प्रेमको परमानन्द अनुभव गर्न कोई फेला पार्न सक्नुहुनेछ। आज उँचो प्रदर्शन र उँचो प्रोफाइलको लागि दिन हो। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनको लागि संगै खाएर शुभ रात्री बिताउने अपेक्षित छ।
भावनात्मक रूपमा तपाईं धेरै स्थिर हुनु हुँदैन – त्यसैले अरूको अगाडि कसरी व्यवहार र कुरा कसरी गर्नु भन्ने ध्यान राख्नुहोस्। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। मित्रहरूसँग भेलाले सान्त्वना प्रदान गर्नेछ। तपाईंको लागि प्रेम हावामा छ। मात्रै वरिपरि हेर्नुहोस्, सबै कुरा गुलाबी छ। काममा र घरमा हुने दबावले तपाईंलाई रिसाहा बनाउन सक्छ। पुरानो कुनै मित्रले तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ र यस दिनलाई अविस्मरणीय दिन बनाउने सम्भावना छ। प्रेम र राम्रो खाना वैवाहिक जीवनका मूल कुराहरू हुन्; र तपाईंले आज यी सबैको राम्रो अनुभव गर्न जानु हुँदैछ।
२०७६, १८ आश्विन शनिबार ०३:२४ October 5, 2019 clickon
तपाईं को आजको राशीफल ( शुक्रबार् ) – तपाईं सबै को दिन शुभ र मंगलमय रहोस्
२०७५, ८ भाद्र शुक्रबार ०२:१० August 24, 2018 clickon